Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पूर्वसांसदलाई पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेस सांसदको लबिङ – Emountain TV
पूर्वसांसदलाई पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेस सांसदको लबिङ
सरोज थापा, २८ भदौ, काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा बढाउँदै पूर्वसांसदलाई पनि पेन्सन दिलाउन केही सांसदले लविङ तीव्र पारेका छन् । त्यसैपनि कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझै दोहन गर्ने काममा सांसदहरु नै दिलो ज्यान दिएर लागि परेका हुन् ।
‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक’ अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूले दबाब दिएपछि सरकारले सो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपी यसमा समितिमा सांसदहरु एकमत नहुँदा सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पूर्वपदाधिकारी मानिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर केही सांसदले पूर्वसांसदलाई पनि पेन्सन दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यस किसिमको लबिङ गरिरहेका छन् ।
तर अन्य दलको असयोगका कारण कांग्रेस सांसदहरुको यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अन्य केही दलले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा बढाउँदै पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने विषयको विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरुकै प्रयास अनुसार विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मीलगायतका लागि राज्य कोषमा वार्षिक ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्समा निर्भर छ । विकासको तुलनामा भ्रष्टाचार कैयौँ गुणा बढी छ । तर सांसदहरु यसरी थलिएको अर्थतन्त्रलाई अझै कोपर्न लागि परेका छन् ।
सांसदहरुको अहिलेको प्रयास भनेको एकपटक जनप्रतिनिधि भएपछि सधैंभरि राज्यकोषमा दोहन गर्ने दाउमात्रै हो । त्यतिमात्रै होइन, पूर्वपदाधिकारीहरू स्वयम् आफ्नो सुविधाका लागि लबिङमा लाग्नु अत्यन्तै लाजमर्दो विषय हो । जनमतसहित संसदमा पुगेका सांसद त झन् आफू निवृत्त भएपछि समेत पेन्सनका रूपमा सुविधा माग गर्नुलाई कुनै हालतमा उचित मान्न सकिदैन । त्यसैले सांसदहरुले राज्यकोषको दोहन गर्ने लबिङ छाडेर मुलुक र जनताको आवश्यकताको बारेमा सोच्न जरुरी छ ।